IATA waxay sii deyneysaa shuruudaha baaritaanka COVID-19 ee habka safarka hawada
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » IATA waxay sii deyneysaa shuruudaha baaritaanka COVID-19 ee habka safarka hawada
Airlines • Airport • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • News • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan
The Ururka Caalamiga ee Gaadiidka Cirka (IATA) shuruudaha la sii daayay ee isticmaalka Covid-19 tijaabinta habka safarka. Haddii dawladuhu doortaan inay soo bandhigaan baaritaanka COVID-19 ee loogu talagalay dadka safarka ah ee ka imanaya waddamada loo arko inay yihiin kuwo halistoodu sarreyso, tijaabooyinku waa inay si dhakhso leh u keenaan natiijooyinka, awood u yeeshaan in lagu sameeyo baaxad, oo ay ku shaqeeyaan heerar aad u sarreeya oo sax ah. Intaa waxaa sii dheer, imtixaanku waa inuu ahaadaa mid kharash-ku-ool ah oo aan abuurin caqabad dhaqaale ama saadka xagga safarka.
The Ururka Duulista Rayidka ee Caalamiga ah (ICAO) la daabacay Kala bax Hanuuninta taas oo ah hagaha caalamiga ah ee dawladaha inay raacaan dib-isugu celinta dadkooda iyo dhaqaalahooda hawada. Kala bax wuxuu qeexayaa lakabyo tallaabooyin ah si loo yareeyo halista gudbinta COVID-19 inta lagu jiro safarka hawada iyo halista soo dejinta COVID-19 ee safarka hawada. Tijaabinta COVID-19 waa inaysan noqon shuruud lagama maarmaan u ah dib-u-furidda xuduudaha ama dib u soo celinta adeegyadii hawada.
Tiknoolajiyadda loogu talagalay baaritaanka degdegga ah ee daryeelka polymerized Chain Reaction (PCR) waxay u noqon kartaa lakab waxtar leh oo ilaalin ah dadka safarka ah ee ka socda waddamada loo arko inay yihiin kuwo halistoodu sarreyso, iyadoo laga yaabo inay meesha ka saarto baahida loo qabo tallaabooyin culeys badan iyo soo dhexgal sida karantiil oo ah caqabadda ugu weyn ee hortaagan. safarka iyo soo kabashada dalabka.
“Diyaaraddaha waxaa ka go’an yareynta halista gudbinta COVID-19 ee safarka hawada iyo baaritaanka COVID-19 ayaa door muhiim ah ka ciyaari kara. Laakiin waa in lagu dhaqan galiyaa iyada oo la raacayo hagista dib u bilaabista caalamiga ee ICAO iyada oo ujeedadu tahay fududeynta safarka. Xawaaraha, cabirka iyo saxsanaanta ayaa ah shuruudaha ugu muhiimsan ee waxqabadka si loogu tijaabiyo in si wax ku ool ah loogu daro howlaha safarka, ”ayuu yiri Alexandre de Juniac, Agaasimaha Guud iyo Agaasimaha Guud ee IATA.
Iyada oo qayb ka ah geeddi-socodka socdaalka baaritaanka COVID-19 wuxuu u baahan doonaa in ay fuliyaan saraakiisha caafimaadka bulshada ee tababaran lana buuxiyo shuruudaha soo socda:
Speed: Natiijooyinka tijaabinta waa in si deg deg ah loo keenaa, iyadoo natiijooyinka la heli karo saacad ka yar oo ah heerka ugu yar.
Miisaanka: Haddii tijaabintu ka dhacdo garoonka diyaaradaha, awoodda tijaabinta ee boqolaal tijaabo ah saacaddiiba waa inay noqotaa mid lagu guuleysan karo. Isticmaalka candhuufta qaadista shaybaarka halkii laga qaadan lahaa suufka sanka ama cunaha ayaa fududeyn lahaa tan sidoo kale waxaa la filayaa in waqtiga la dhimo lana wanaajiyo aqbalaada rakaabka
saxnaanta: Saxnimada aadka u saraysa waa lama huraan. Natiijooyinka been abuurka ah iyo kuwa been abuurka ah labadaba waa inay ka hooseeyaan 1%.
Halkee ayuu imtixaanku ku habboon yahay habka safarka?
Sida habboon COVID-19 tijaabada waxaa looga baahan doonaa kahor imaatinka garoonka diyaaradaha iyo 24 saac gudahood safarka. Rakaabka imanaya "diyaarad-u-duulaya" waxay yareyneysaa halista in la is-qaadsiiyo ee garoonka diyaaradaha waxayna awood u siisaa dib-u-degista hore ee socotada kasta ee tijaabada caafimaad qabta.
Haddii tijaabinta looga baahan yahay qayb ka mid ah habka safarka, waxaa lagugula talinayaa bixitaanka. Dowladuhu waxay u baahnaan doonaan inay si wada jir ah u aqoonsadaan natiijooyinka imtixaanka iyo gudbinta xogta waa inay si toos ah uga dhex dhacdaa rakaabka iyo dawladaha si la mid ah maadaama fasaxyada elektarooniga ah hadda la maareeyo
Shuruudaha imtixaan kasta waa inay jiraan oo keliya inta loo baahdo. Si taas loo hubiyo, waa in qiimeyn joogto ah la sameeyaa.
Yey tahay inuu bixiyo?
Kharashku waa tixgelin muhiim ah. Tijaabadu waa inay fududeysaa safarka oo aysan keenin caqabad dhaqaale. Iyadoo tijaabinta qaar ka mid ah meelaha Yurub loo socdo ay ku kacayso $ 200, tani waa walaac dhab ah. IATA waxay taageertaa Xeerarka Caafimaadka Caalamiga ah ee Ururka Caafimaadka Adduunka (WHO) oo dawladaha uga baahan inay qaadaan kharashaadka baaritaanka caafimaadka ee khasabka ah. Halka tijaabada lagu bixiyo si ikhtiyaari ah, waa in lagu qaadaa qiimaha qiimaha.
Maxaa dhacaya marka qof tijaabiyo cudurka?
Tijaabad ahaan waxaa la sameeyaa ka hor safarka ama barta laga dhoofo natiijada ka soo baxdana waxay noqoneysaa in rakaabku uusan u safri karin sidii loogu talo galay. Xaaladdan oo kale, shirkadaha duulimaadyadu waxay siinayeen dabacsanaan macaamiisha. Tan waxaa ka mid ah dib-u-sii-dalbashada ama lacag-celinta iyada oo la raacayo siyaasadda ganacsiga shirkadda. Shirkado badan oo duulimaadyo ah ayaa si isku mid ah ugu fidiya rakaabka ka shakisan inay qabaan astaamo u dhigma COVID-19 iyo sidoo kale xubnaha isla safarka safarka ah, gaar ahaan marka ay isku qoys yihiin.
Haddii imtixaanku waajib ku yahay imaatinka isla markaana rakaabku tijaabiyo, markaa rakaabka waa in loola dhaqmaa si waafaqsan shuruudaha Gobolka qaabilaya. Shirkadaha duulimaadka looma baahna inay dib u celiyaan rakaabka ama 'lagu ciqaabo' ganaaxyo lacageed sida ganaaxyo ama ciqaab shaqo sida ka noqoshada xuquuqda ka shaqeynta suuqa.